Ezinye iindlela zasimahla kwiOfisi yeMicrosoft | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Izicelo, software
Ukusukela ngoku inguqulelo yayo yokuqala, kwiminyaka engama-31 eyadlulayo, iOfisi kaMicrosoft iye yagqitywa Isalathiso kwihlabathi lekhompyuter xa usenza naluphi na uhlobo loxwebhu, nokuba luxwebhu lokubhaliweyo, ispredishithi okanye intetho. Kwiminyaka embalwa ngoku, ekuphela kwendlela yokuyisebenzisa kukubhaliselwa.
Ukuba sikhangela kancinci kwi-Intanethi, sinokufumana iphepha-mvume lonyaka omnye lokusebenzisa iOfisi 365 yee-euro ezimbalwa. Nangona kunjalo, ukuba iimfuno zakho ungahambi kwinani elikhulu lokukhetha iOfisi yenza ukuba sifumaneke ngokusetyenziswa kwayo okuphambili, apha ngezantsi sikubonisa ezona ndlela zisimahla simahla kwiOfisi kaMicrosoft.
Nokuba uza kuba yintoni umsebenzi wethu, kunokwenzeka ukuba sigcine zonke iifayile zethu efini, nokuba nguGoogle, Apple, Microsoft okanye nayiphi na enye into. Ukukwazi ukuhlela iifayile ngokuthe ngqo kwilifu ngaphandle kokuzikhuphela kwisixhobo sethu yenye yezona zinto ziphambili ekufuneka zinikezelwe ngumntu wonke nikezela ngokuguquguquka okuphezulu kubasebenzisi.
IOfisi 365 isekwe kolo luvo, kuba ilayisensi yayo ayisivumeli kuphela ukuba sisebenzise usetyenziso lwayo kwi-intanethi, okanye iinguqulelo ezikhutshelweyo kwikhompyuter yethu, kodwa isinika indawo yokugcina iphezulu kakhulu kunaleyo isinika yona ngeakhawunti elula yeMicrosoft, 5 ebuhlungu i-GB.
Ngaphambi kokukhangela enye indlela kwiOfisi kaMicrosoft, nayo Kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba leliphi iqonga esifuna ukulisebenzisa, kuba kuxhomekeka ekubeni yeyiphi, sinendlela enye okanye ezinye esinokukhetha kuzo, zonke zisebenza ngokulinganayo, nangona ngamanye amaxesha zohlulahlula.
1.1 Iyahambelana nayo yonke idesktop kunye neqonga leeselfowuni
2 Amaphepha, amanani kunye neNkcazo
2.1 Iyahambelana neMacOS ukongeza kwi-iOS
3.1 Iyahambelana nawo onke amaqonga edesktop
4 Ofisi yeWPS
4.1 Iyahambelana nayo yonke idesktop kunye neqonga leeselfowuni
5.1 Iyahambelana nawo onke amaqonga edesktop
6 Yeyiphi eyona ilungileyo?
Iyahambelana nayo yonke idesktop kunye neqonga leeselfowuni
Ukuba awufuni ukwenza nzima ukukhuphela ubomi bakho kwizicelo ongasokuze uzisebenzise kwikhompyuter yakho, esona sisombululo sinaso sibizwa ngokuba yiGoogle Amaxwebhu, isuti yeofisi kaGoogle emele imiba emibini: akukho sidingo sokufaka kwikhompyuter yethu (nangona inokusebenza ukuba sifuna ukusebenza ngaphandle koqhagamshelo lwe-intanethi), kuba iqhuba ngebrawuza yethu (ukuba ingcono kuGoogle Chrome) kwaye yenye yezona zilula kwimarikenjengoko inani lezinto ezikhoyo linokulinganiswa.
Amaxwebhu, iiSpredishithi kunye neeSilayidi ligama lezinye iindlela ezinokungena kwiLizwi, i-Excel kunye nePowerpoint esisifumana kuGoogle. Ukufumana umbono wenani lezinto esinokuzifumana kuGoogle amaXwebhu, sinokuthi isicelo IWordPad yeWindows isinika ngokufanayo imisebenzi efanayo namaXwebhu, mhlawumbi eyokugqibela ibandakanya ezinye.
UXwebhu lukaGoogle lujolise kubo bonke abo basebenzisi abafuna isicelo sokwenza amaxwebhu okubhaliweyo, iispredishithi okanye inkcazo manqaphanqapha. Into elungileyo yile isimahla kwaye iphindaphindwe, ke sinako ukufikelela kunye nokwenza umxholo kuso nasiphi na isixhobo, nokuba siselfowuni okanye i-desktop.
Amaphepha, amanani kunye neNkcazo
Iyahambelana neMacOS ukongeza kwi-iOS
UApple usinika iOfisi yayo, eyayibizwa ngokuba yiWork, isoftware enamaphepha, amanani kunye neKeyynote elingana neLizwi, i-Excel kunye nePowerpoint ngokwahlukeneyo. Ngelixa kuyinyani ukuba inani leenketho ezikhoyo hayi phezulu njengeOfisiNjengoko iminyaka ihamba, elo nani liyanda kwaye namhlanje yeyona ndlela ingaphaya isemthethweni yokufumana inkululeko kubasebenzisi beemveliso zeApple.
Amaphepha, amanani kunye ne-Keynote, ziyafumaneka kwi-iOS kwaye zonke iifayile zigcinwe efini, ukuze sikwazi Qhubeka nokwenza amaxwebhu apho sishiye khona i-iPhone, i-iPad okanye iMac. Le suite yeApple, ngenxa yezizathu ezicacileyo, ifumaneka kuphela kwiimveliso zeApple, ke ukuba awunayo iMac, ungayilibala ngayo. Kodwa ukuba unayo, yeyona nto ifumaneka simahla ngoku kwimarike.
Iyahambelana nawo onke amaqonga edesktop
OpenOffice iyafumaneka kuzo zombini iiWindows kunye neMac kunye neLinux. Ibiphantsi kwesambrela se-Oracle kunye ne-Sun Microsystems, ke asithethi ngesoftware esemgangathweni. Emva kwe-OpenOffice sifumana izicelo ezintathu ezilingana neLizwi, i-Excel kunye nePowerpoint, nenani elikhulu lemisebenzi kunye ukuhambelana nefomathi esetyenziswa yiMicrosoft kumaxwebhu akho.
Ekuphela kwento esiyifumanayo kule software kukuba ngaphandle kokuvula amaxwebhu okubhaliweyo, iipredishithi kunye neentetho zeOfisi, Awunakho ukuthumela ngaphandle kweefayile kwezi fomathi.
Elinye isuti lezicelo ezinikezelwa njengenye indlela eya kwiOfisi zifumaneka kwi Ofisi yeWPS, iseti yezicelo ezinemvelaphi yaseAsia, ethe kancinci kancinci ikwazile ukufumana indawo yentengiso. Le projekthi yazalwa njengeOfisi yeKingsoft ngo-1988, ke yenye yezona zidala esinokuyifumana ngoku kwintengiso.
Umbhali, iSpredishithi kunye neNtetho, Zilingana neLizwi, i-Excel kunye nePowerpoint esiyifumana kwi-WPS OFfice. Le suite ifumaneka simahla ukuze ikhutshelwe. Sikwanayo nenguqulo ehlawulelweyo enemisebenzi emininzi, kodwa kubasebenzisi abaninzi, uguqulelo olusisiseko lungaphezulu ngokwaneleyo. IOfisi yeWPS iyafumaneka kwiWindows, MacOS, Linux, iOS, kunye ne-Android.
Sigqiba isishwankathelo sezinye iindlela zasimahla kwiOfisi yeMicrosoft LibreOffice, enye yeendlela ezithandwayo phakathi kwabasebenzisi abagqibe kwiminyaka eyadlulayo ukujikisa isuti yeMicrosoft ngokupheleleyo. Ngokungafaniyo neOfisi yeMicrosoft, iLibreOffice yenziwe ngezicelo ezahlukeneyo ukwenza iifayile ezahlukeneyo, nokuba ngamaxwebhu okubhaliweyo (Umbhaliispredishithi ()Calc), Yenza kwaye uhlele iifomula zemathematics (IMathematika), Hlela imifanekiso yevector (Dweba) okanye iziseko zedatha isiseko.
Ifomathi esetyenziswa yiLibreoffice yi-ODF, ifomathi onokuthi uhlangane nayo amaxesha ngamaxesha. Nangona kunjalo, I-100% iyahambelana nefomathi yangoku kunye nelifa leMicrosoft, ke ukuhambelana kungaphezulu kokuqinisekisiweyo. Ukuphela kwento esiyifumanayo kwiLibreOffice kukuba ifumaneka kuphela kwiWindows, iMacOS kunye neLinux, akukho maqonga ahambayo.
Yeyiphi eyona ilungileyo?
Kwisandle esinye kuxhomekeke kwinkqubo yokusebenza esiyisebenzisayo. Ukuba sisebenzisa i-macOS, olona khetho lulungileyo, njengoko benditshilo ngamaPhepha e-Apple, amanani kunye ne-Keynote. Ukuba sifuna ukungqinelana kokona kulungileyo yiLibreOffice. Kodwa ukuba le nto siyikhangelayo yeyamaqela, uGoogle amaxwebhu liqonga elisinika ezona khetho.
Kufuneka ithathelwe ingqalelo ngawo onke amaxesha akukho nanye kwezi zixhobo zokusebenza ukuya kuthi ga ngoku kwaye asinakuphulukana ngokuchanekileyo neOfisi, ngale nto andifuni ukubeka isibindi, amakhonkco, iitafile nezinto ezilolo hlobo. Kumsebenzisi oqhelekileyo zizinto ezintle onokukhetha kuzo, kodwa hayi iinkampani ezinkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Ezinye iindlela zasimahla kwiOfisi yeMicrosoft